Yaa ka danbeeyay in Farmaajo diido Go'aankii ahaa inuu Jen. Bashiir Goobe hoggaamiyo Hay'adda NISA? - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Saraakiisha NISA oo ay ku jiraan Fahad Yaasiin iyo C/llaahi Kulane ayaa sidoo kale diiday in Bashiir Goobbe Hoggaamiyo hay’adda NISA, taasoo ay ugu wacan tahay awood qeybsiga Beelaha iyo halista ah inuu ogaado arrimo Hay’adda soo maamushay oo qarsoodi ah.
Kulan uu doonayey inuu Farmaajo mar kale la yeesho Rooble ayaa baaqday kadib markii Ra’iisal wasaraha ogaaday inuu isbedelay go’aankii hore la isula meel dhigay, waxayna xaaladii isu bedeshay is mari waaga hadda taagan.
Taliyeyaasha ciidamada ee Milatariga, Asluubta iyo Booliska ayaa u muuqda inay qeyb ka yihiin dhibaatada ka dhex taagan Madaxweynaha xilku ka dhammaaday iyo Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta.
Previous articleWasiirka cusub ee Amniga oo lagu hor dhaariyey RW Rooble iyo Wasiir kale oo dhaariyay
Next articleXOG: Qoorqoor iyo Lafta-gareen oo ku biiray Waanwaanta laga dhex wado Farmaajo iyo Rooble